Tuesday October 02, 2018 - 09:56:25 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Waxaa xalay isbitaal kuyaal magaalada Muqdisho ku geeriyooday wasiirkii Bay'ada iyo daaqda maamulka isku magacaabay 'Koonfur Galbeed' ahaana siyaasi sumcad xun.
Macalin Maxamuud oo ku magac dheeraa (Macalin Jiis) ayaa tobankiin sanadood ee ugu dambeeyay wuxuu ahaa xildhibaan katirsan Baarlammaanadii Dowladda Federaalka ee is xigixgay.
Ninkan ayaa taariikh madoow ku dhax leh siyaasadda Soomaaliya wuxuu kamid ahaa xildhibaannadii sida aadka ah ula safnaa Cabdullaahi Yuusuf Axmed xilligii ay ciidamada Itoobiya qabsadeen Magaalada Baydhabo iyo Koonfurta Soomaaliya inteeda kale.
Ehellada Wasiir Jiis waxay sheegeen in bilihii lasoo dhaafay uu ka sheeganayay xanuun kaas oo ugu dambeyntii sababay in uu geeriyoodo.
Macallin Jiis ayaa soo caan baxay xilliyadii ay xildhibaannada Baarlamaanka Dowladdi KMG ah fadhiyada kuyeelan jireen magaalooyinka Baydhabo iyo Nairobi wuxuuna kamid ahaa xildhibaannadii codka dheer ku taageeri jiray in ciidamada Xabashida Itoobiya ay qabsadaan Soomaaliya.
Macallin Jiis hadda wuxuu isku ahaa wasiir iyo xildhibaan katirsan maamulka Koonfur Galbeed wuxuuna dadaal ugu jiray in markale dib loosoo doorto Shariif Sakiin
Dadka yaqaan Macallin Jiis waxay sheegaan in uu ahaa Maskaxdii ka dambeysay in Shariif Sakiin uu noqdo madaxweynaha 'Koonfur Galbeed' sidoo kale wuxuu xiriir dhow lalahaa saraakiisha Xabashida Itoobiya ee xoogga ku jooga gobollada Bay iyo Bakool.
Ciidamada AMISOM iyo kuwa Dowladda oo qaraxyo lagula beegsaday Muqdisho.
Ciidamo Talyaani ah oo qarax xooggan lagula beegsaday gudaha magaalada Muqdisho